Goobaha Kubada Cagta ee Maltese Online - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Meelaha Cinwaanka Maltese Online
Loading ... Laga bilaabo Maarso 2018 dhamaan noocyada khamaarka waa sharci ahaan Malta. Hay'adda Malta Gaming Authority (MGA) waa hey'adda sharciyeynta ah ee mas'uulka ka ah maamulka khamaarka ee Malta. Waqtigan xaadirka ah ee wadanka waxaa jira xulal badan oo khamaar kala duwan leh: casinos, casinos cruise, lotteries, hoolka bingo, mishiinnada ciyaaraha iyo rikoodhada joogtada ah ee ciyaaraha xirfadda.
Qeybta internetka khamaarka waa mid ka mid ah qaybaha ugu sareeya ee ciyaaraha ciyaaraha ee Malta, waxaana ku xiran sharuudaha xeerarka ciyaaraha fog. Goobtii ugu horeysay ee online-ka ah ee Malta waxaa lagu bilaabay 2000 waxayna ku hawlanayd ciyaaraha isboortiga online-ka ah. Bishii Abriil 2004, waddanku waxa uu galay qaab qaanuuneed oo sharciyeynaya dhammaanba ciyaaraha ciyaaraha onlineka. Malta waxay ahayd xubintii koowaad ee waddanka EU-da, baaxadda si buuxda u maamusha khamaarka internetka. Sababtoo ah Malta waxay bilowday in ay bixiso liisamada bixiyayaasha internetka ee ku dhawaad ​​dhammaan noocyada khamaarka. Qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu caansan ee ciyaaraha ciyaaraha ka socda ee Malta, oo ay ku jiraan Mr Green, Betsson, Bet-at-ha, Interwetten.
Waxaad eegtaa liiska goobaha casino ee aqbalaya ciyaartoyda ka imaanaya Malta, oo bixiya cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka imanaya mashiinnada moobiilka si loo ciyaaro casriyeynta oo ka soo jeeda kuwa sida caanka ah ee caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Fasaxyada Malta - waxay u safrayaan, kubadda cagta, badda, barashada Ingiriisiga, iyo dabcan casino. Jasiiradda qoraxda yaryar ee ku taal badhtamaha badda Mediterranean ma noqonin oo kaliya isgoysyada wadooyinka ganacsiga iyo diblomaasiyadeed, laakiin sidoo kale mid ka mid ah caasimadaha nolosha khamaarka ee Yurub. Aynu ogaano!
Malta - wax yar oo ku saabsan goobta iyo taariikhda;
Casinos-ka internetka waa sharci dalka, waa mid caan ah. Malta waa ku dhawaad ​​xarunta dhexe ee ugu weyn ee adduunka ku yaala;
Malta ama Jamhuuriyada Malta - jasiiradda badda Mediterranean, koonfurta koonfurta Sicily, taas oo inta badan loo arko inay tahay mid degan UK . Magaciisa quruxda leh ee uu ka heley Phoenicians, oo ah luqadda malat ay u tarjumayso "hoy".
Inkasta oo aagga jasiiraddu ay yartahay, taariikhda aadka u sarreysa. Tani maaha wax la yaab leh, sababtoo ah Malta waxay ku taallaa wadada isku xirta Yurub ilaa Afrika iyo Aasiya. Weli waxa ku jira qarnigii VIII ee BC. e. Fikrado iyo Giriig ah ayaa u yimid dhulkan. Muddo qarniyo ah, dhulku wuxuu u gudbay Carqaginiinta, Rooma, Byzantina, Carabta, Norman, Norman, Isbaanish. Madaxbanaani buuxda oo ka timid waddanka Ingiriiska ayaa helay keliya 1964.
Maanta Malta waa waddan xildhibaan oo madax ka ah Madaxweynaha Marie Louise Coleiro Preca. Mawqifka ra'iisal wasaaraha waxaa iska leh Joseph Muscat.
Malta waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha leh ee khamaarayaasha, safarka adduunka oo dhan. Weli wali! Ka dib oo dhan, aag yar oo kaliya mitirrada labajibbaaran ee 316. 4 km oo ka yimid Casino Casino: Oracle Casino, Dragonara Casino, Casino di Venezia, Casino at Portomaso.
Guri kasta oo khamaar leh wuxuu leeyahay taariikh iyo dhaqameed gaar ah. Midka saxda ah: casuun kasta wuxuu u yahay meel aad u fiican roulette, blackjack, Caribbean Poker, Naqshad, Texas Holdem, Sadarka Three Card Poker, Faransiiska ama Roulette elektarooniga ah iyo mashiinno tiro badan.
Malta waxaa loo ogol yahay inay ciyaaraan sanado 18. Kaliya marka laga reebo waa muwaadiniinta waddanka laftiisa, taas oo loo ogolaado casino-dukaanku inuu furo 25. Booqashada ugu horeysa ee martida ayaa hubaal ah inaad waydiisatid baasaboor, sidaas darteed waxay bixinaysaa si ay ula qabsadaan.
Maltiga waa daacad u ah xeerka dharka, sidaas awgeed noo calaamad ah waa mid caqli ahaan / casri ah. Looma oggola kaliya dharka qubeyska, iyo ka dib 20-00 - gaaban iyo shaati furan iyo kabo. Laakiin xitaa martida ma xirna qaabka, waxaad ka heli kartaa gudaha, ku filan in aad kireysatid halkan jacket iyo xerada. Waxaa xusuus mudan in macaamiisha dharka fiidmeerka ah ee dhammaan Malinese yaryar ay bixiyaan gaadiid lacag la'aan ah.
Meeshan waxaa sidoo kale loo yaqaan casino dimuqraadi ah. Waxay ku taalaa xeebta St Paul's Bay ee waqooyiga jasiiradda waa qayb ka mid ah Dolmen Resort Complex 4 * - waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu wanaagsan ee dalka. Meelaha dimuqraadiga ahi waa in haddii dhacdooyinka khamaarka lumo ay ka soo noqdaan 10 ilaa 20%.
Tani waa casinos ugu horeeyay ee u muuqday Malta, waxaa la furay 1964. Dhismuhu aad buu u weynaa - waxaa lagu dhisay 1870. Markii hore, waxay ahayd degaanka Emmanuel Scicluna, bangi. Dragonara Casino waxay ku taallaa wadnaha habeenkii, sababtoo ah waxa ku jira St Julian.
Casino waa mid cajiib ah min daqiiqadii ugu horeysay ee dhismaha taariikhiga ah - oo ah xarunta kabtanka, oo ay dhiseen Knights of St. John ee 1685. Booqashooyinka waxay ku raaxeysan karaan aragti cajiib leh ee Grand Harbor ama waxay u socotaa lugta iyadoo la marayo hareeraha Vittoriosa. Qolka sedexda ah waa mid gaar ah, gudaha dhexe ee meel gaar ah waxaa la siiyaa muraayada Murano, dhirbaaxo, farshaxan balaadhan oo waaweyn iyo alaabta daba-galka ah.
Casino waa qayb ka mid ah dhismo caan ah oo ka mid ah St. Julian's, hudheel raaxo leh iyo guryo 5, makhaayadda gaarka ah, hoteelka Hilton iyo xarumaha ganacsiga. Sidoo kale, marka xarunta saldhiga casino.
Maxay dadka jecel yihiin qamaarka Malta? Halkan, qof kastaa wuxuu heli karaa ruqsad si uu u abuuro boggiisa khamaarka, laakiin maaha inuu leeyahay shirkad Maltese ah. Dhamaan macaamil dhaqaale waa in la qabtaa hawlgal Maltese ah.
Xoriyaddan ayaa sharraxaysa sababta ay ujeeda Maltese leh mishiinnada wax lagu duubo, roulette iyo kaadhadhka kaararka ay aad uga badan yihiin kuwa kale. Kuwa jecel inay lacag u ciyaaraan iyaga oo aan ka tegin kombuyuutarka, way ku farxi doonaan. Malta, waxaa loo balan qaadayaa si sharciya, raaxo leh oo ammaan ah.
Grand Master's Palace. Cinwaanka: Palace Square / Jamhuuriyada waddada, Valetta. Qalabkani wuxuu ku yaalaa wadnaha La Valletta, waa wadnaha xarunta taariikhiga ah. Halkan waa degenaanshaha baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Cathedral of Saint John. Goobta: St. Lucia Street, Valletta. Dhismaha kaniisadda, oo loo qaabeeyey amarro kala ah Jean de la Kassera waxay u egtahay qulqul. Dhismuhu wuxuu bilaabmay ka dib markii ay kufsadeen Malta. Khasaarada ugu weyn waa sawir qaadid Caravaggio. Waxaa xiiso leh in la baaro xabadaha mugdiga.
Matxafka Qaranka Qaranka. Cinwaanka: Triq Ir-Repubblika, Valetta. Waxaa xiiso leh dhismaha matxafka - hareeraha qarniga 16th Auberge de Provence iyo sidoo kale bandhigga, kaas oo laga helayo xilligii Neolithic (5000 BC) iyo farshaxan qiimo leh.
Matxafka Dagaalka Qaranka. Goobta: St. Fort. Elmo, Valetta. Matxafku wuxuu ku yaalaa kaydkii hore ee qoryaha, inta badan filimadii taariikhiga ah ee laga sameeyey Mediterranean. Malta waa sawiro gaar ah 1941-1943, oo muujinaya jasiiradda burburay.
Masraxa Manoel. Cinwaanka: 115 Triq it-Teatru l-Antik, Valletta. Waa tiyaatarka ugu da'da weyn dalka, oo lagu dhisay qarnigii XYX ee amar-diimeedka Grand Master Manoel de Vilho. Halkaan waxaa lagu keydiyaa xirmooyinka xirmooyinka, dharka iyo rinjiyeynta.
Malta ma laha wabiyo iyo harooyin, iyo ilo kale oo dheeri ah. Dhamaan biyaha la cabo waa la keenaa.
Dalxiiska - mid ka mid ah tiirarka dhaqaalaha.
Gaadiidka Malta ee baabuurta bidixda.